Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny tranofiara 'The Darkness' dia milaza amin'ny NC-17, tantaram-pandrenesana vahoaka momba ny mpamosavy sy ny fiovana
by Trey Hilburn III Jona 9, 2021
nosoratan'i Trey Hilburn III Jona 9, 2021
Ny tranofiara voalohany ho an'ny Ny haizina avy amin'ny talen'ny Tharun Mohan dia mampiharihary horohoro vitsy an'isa - izay mitondra any amin'ny lalana voaozona satanika. Ny sarimihetsika dia toa fifangaroan'ny horohoro sy ny paikady erotika. Tena te hahalala aho raha ny isa NC-17 dia vokatry ny fihenan'ny herisetra sy ny herisetra sa avy amin'ny lafiny mampihomehy? Hevero fa tsy maintsy miandry isika ary hijery.
Ny synopsis ho an'ny Ny haizina mandeha toy izao:
Tao amin'ny fialan-tsasatry ny firenena iray, hanoratra ny novelony vaovao, mahatsapa fanatrehana hafa ao an-trano i Lisa. Mahatsapa ny fanahin'ny fanahy mitantana azy izy, mandefa azy amin'ny làlana mankamin'ny hadalana. Afaka mahita ny marina ao ambadiky ny Fanahy ao an-trano ve izy sa ho very mandrakizay?
Eny, tsara! Mandavaka tantaram-panovana sy mpamosavy aho. Ny haizina toa mifampiraharaha amin'ireo roa ireo, somary kely. Toa manondro ny zava-misy aza fa ny tena mampiavaka an'i Lisa dia mety ho ny fanovana ny tenany.
Ny haizina kintana Amelia Eve (Ny fanorisorenana an'i Bly Manor), Cyril Blake (Ny lalao miandry, Z-List), Katherine Hartshorne (Andro sambatra indrindra, korontana eo amin'ny sehatry ny hery), Jo Hart, Adam Bond.
Inona no hevitrareo lehilahy momba ilay tranofiara Ny haizina? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Neil Gaiman mitsidika ny andiany The Sandman ary talanjona noho ny famolavolana famokarana. Jereo eto.
Changelingshorohoro vahoakai SatanaNy haizina